Abathandi be-diy bazenzela inqaba yefowuni besebenzisa i-raspberry pi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Abathandi be-DIY benza eyabo inqaba yeselfowuni besebenzisa iPaspberry Pi
Abathandi be-DIY benza eyabo inqaba yeselfowuni besebenzisa iPaspberry Pi
Ukhe weva ngeRaspberry Pi, awuzange ube nayo? Kwimeko apho ungazazi izinto ezipholileyo, ezincinci, yikhompyuter yexabiso eliphantsi yeLinux eyaziwayo phakathi kwabathandi be-DIY. Kuba ixabisa i-25 yeedola kuphela, uninzi lweeprojekthi zobunjineli zijikeleza kuyo, kubandakanya le yenqaba yeselfowuni eyenziwe yi-PA Consulting e-UK.
Kwaye loo nto iyathandeka ngokwenene. Isiseko sesiseko se-GSM sisiseko esineenyawo ezingama-30 ubude esineendleko ezininzi, kodwa iqela leenjineli ezikhuthazayo ziphinde zasebenza ngokusebenza kwesoftware evulelekileyo kunye neRaspberry Pi. Banokude bathumele imiyalezo ebhaliweyo kwaye benze iifowuni ngaphezulu kwenethiwekhi abayenzileyo, nangona kuye kwafuneka basike isignali yerediyo & apos; s ukuze bangaphazamisi ukubonwa kwabaphetheyo bendawo.
Ke ewe, le projekthi Raspberry Pi esekwe ngumboniso omkhulu wendlela isiseko esinexabiso esimalunga nokutshintshwa kwamaselula kunokufakwa endaweni ethile kusetyenziswa izixhobo zexabiso eliphantsi, ezifumaneka ngokulula. Khawufane ucinge uthungelwano lwefowuni olungxamisekileyo olunamandla aphantsi lwenziwe kusetyenziswa uninzi lwezi, okanye ukuba iindleko zokwandiswa kweziseko zophuhliso zinokuncitshiswa njani ngoncedo lweemodyuli zekhompyuter ezifanelekileyo.
umthombo: Izinto ze-Elektroniki ezintsha nge TechCrunch
Eyona iphone iphambili ye-6 kunye ne-2016
Eyona fowuni yeVerizon yokuthenga ngo-2021
Ngokukhawuleza tshintsha umfanekiso weprofayile kwiNkqubo yoQhakamshelwano lukaGoogle
Uyifumana njani ikhibhodi enjenge-iPhone kwi-Android
IMotorola Moto Z4 vs Google Pixel 3a XL